Voaroban’ny jiolahy ny vola 30 tapitrisa Ar: voatifitra teo amin’ny tendany sy ny sorony ilay mpitam-bolana orinasa - ewa.mg
News - Voaroban’ny jiolahy ny vola 30 tapitrisa Ar: voatifitra teo amin’ny tendany sy ny sorony ilay mpitam-bolana orinasa
Avotra ihany ny
ain’ilay lehilahy, na dia naratra mafy noho ny tifitra intelo (teo
amin’ny sorony sy ny tendany, ary teo amin’ny lamosiny) aza izy.
Lasan’ireo jiolahy kosa ny volabe 30 tapitrisa Ar. avy nalainy tao
nitam-piadiana mahery vaika indray tao Toliara, omaly antoandro teo
amin’ny sampanana eo amin’ny biraon’ny hetra Toliara.
Mpitambolan’ny orinasa Copefrito avy naka vola tao amin’ny banky
iray ao an-toerana no notafihin’ny jiolahy teo amin’io toerana io.
Vola saika entina hanangonam-bokatra fanaon’ny orinasa no lasan’ny
jiolahy tampoka tao anatin’ny fotoana fohy. Araka ny
fitantaran’ireo olona nanatri-maso, jiolahy roa no nanakana ny posy
nitondra ity mpitambola ity ka tsy nihambahamba nitifitra azy
intelo. Vokany, voatifitra teo amin’ny tendany sy ny sorony ary ny
lamosiny ilay mpitam-bola. Lasan’ireo jiolahy avy hatrany ny kitapo
nisy ilay vola 30 tapitrisa Ar ka nandositra nihazo ny avenue Monja
Jaona ry zalahy. Fotoana fohy taorian’ny fanafihana, tonga haingana
teny an-toerana ny polisy misahana ny ady heloka bevava nanao ny
fanadihadiana ilay mpitondra posy…
Nahitana vodim-bala ana mpitandro
filaminana teny an-toerana, nandritra ny fitsirihana nataon’ny
polisy. Hatreto aloha, tsy mbola fantatra mazava ny tobi-miaramila
nivoahan’ity fitaovam-piadiana nentina nanafihana ity. Nanaovana
fanadihadiana any amin’ny polisy ilay mpitondra posy. Ilay naratra
kosa nentina notsaboina ao amin’ny Clinique Saint Paul ao Andaboly.
Nambaran’ny mpitsabo fa tsy nahavoakasika ny taovany ny bala ka tsy
misy atahorana ny ainy, saingy mbola manaraka fitsaboana kosa izy.
Tsy mbola hita kosa ireo nahavanon-doza tamin’ity fanafihana ity.
Mitohy, araka izany, ny fanadihadiana ilay mpitarika posy, izay
marihina fa posin’ny orinasa ihany ity nentin’ilay mpitam-bola
nakana vola tany amin’ny banky. Ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny
polisy, araka izany, no hahafantarana ny marina rehetra momba ity
fanafihana ity. Matetika ahitana trangana fanafihan-jiolahy ao
an-tampon-tanànan’i Toliara na eo aza ny ezaka ataon’ny mpitandro
filaminana, tsy kely lalana kosa ny ratsy.
L’article Voaroban’ny jiolahy ny vola 30 tapitrisa Ar: voatifitra teo amin’ny tendany sy ny sorony ilay mpitam-bolana orinasa a été récupéré chez Newsmada.
Pilo kely #4486 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4486 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
CENI : Arenina ny lesoka
Nilaza ny hanarina ny lesoka rehetra hita tamin’ ny fifidianana fihodinana voalohany ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, amin’ ity dingana faharoa ity. Isan’ny lesoka goavana hita farany teo, ary hanentananny CENI ireo mpifidy, ny tokony hangalan’ ny rehetra ny kara-pifidiana eny amin’ ny fokontany. Nilaharana tokoa mantsy ny kara-pifidianana, ary mbola nifampitadiavana tamin’ ny androm-pifidianana, anton’ny nampandeha ihany koa ny tsaho fa misy ny fangalaram-bato. Tsara rahateo no mampatsiahy fa manana adidy goavana amin’ ny fizarana ny kara-pifidianana ny minisiteran’ ny Atitany, saingy minia mangina izy ireo amin’ zava-misy. Ambany fahefan’ ny minisiteran’ny Atitany ny fokontany, ary ny fokontany no tokony hizara ny kara-pifidianana isan-trano, saingy tsy hita izany asa izany. Hatreto tokoa mantsy dia misy ny tsy fandoavan’ny minisitera ny tambin-karaman’ny lehiben’ny fokontany, sy ny fampandehanan-draharahan’izy ireo. Ireo rehetra ireo noho izany no isan’ny anton’ny mampihitsoka ny kara-pifidianana eny amin’ ny fokontany, anton’ny fanentanana ataon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana amin’ireo mpifidy rehetra haka ny karatrany. Ankoatra izay dia hisy ny fanofanana ny eny anivon’ ny SRMV iray manontolo eraka ny distrika, satria dia tsapan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, fa isan’ny nahita lesoka teny anivon’ ireny rantsa-mangaika ireny. Ankoatra izay dia hohatsaraina ihany koa ny fomba fiasan’ny tompon’andraikitry eny amin’ ny rantsa-mangaika rehetra, mba hialana amin’ ny mety ho fifandisoana. Vonona ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana amin’ ny dingana faharoa, ary efa niomana izy ireo, efa ela ihany koa izany noho ny tetiandro efa voafaritra mialoha. Fantatra aza fa ny zoma izao dia hisy ny fivoriana hiarahan’ireo rehetra misehatra amin’ ny fifidianana, miaraka amin’ny CENI etsy Nanisana. Izany dia efa mariky ny fiomanana sahady amin’ ny fifidianana, satria dia ho sarotra ihany ny fanomanana sy ny andraikitra amin’ ny fihodinana faharoa noho ny fifidianana amin’ny fotoanan’ny orana. Laharana anaty bileta Tsy hisy intsony izany ny antsapaka hamaritana ny laharan’ireo kandidà roa hiatrika ny dingana faharoa amin’ny fifidianana filoham-pirenena, fa samy hitazona ny laharana nentiny tamin’ ny dingana voalohany teo izy ireo, hoy ny mpikambana eo anivon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana Hervé Philibert Andriamanantsoa. Noho izany dia ny laharana faha-25 ihany izany no hamantarana ny kandidà Marc Ravalomanana, ary ny laharana faha-13 kosa ny an’i Andry Rajoelina. Raha ny firafitr’ireo kandidà anatin’ny bileta tokana kosa dia tsy hanao ambony sy ambany izany, fa kosa hifanila havia sy havanana, ka izay nahazo vato betsaka indridra no hitoetra eo amin’ ny ankavia, ary eo amin’ ny ankavanana no misy ny laharana faha-25, Marc Ravalomanana. Izany moa no natao dia noho ny fahafohezan’ny fotoana amin’ ny fifidianana dingana faharoa, ka mba izay fitaovana fampielezan-kevitra tamin’ ny dingana voalohany ihany izany no ampiasain’ ireo kandidà. Iratra Raitra L’article CENI : Arenina ny lesoka est apparu en premier sur .L’article CENI : Arenina ny lesoka a été récupéré chez Triatra.
Basikety – «Afrique 2018»: indroa resy ny MB2 All
Ratsy fiditra ny MB2 All, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy vehivavy, taranja basikety (CACC). Fihaonana, tanterahina any Maputo, renivohitr’i Mozambika. Faharesena indroa nisesy mantsy no azon’ny ekipa malagasy, teo amin’ny fifanintsanana ho an’ny vondrona “B”. Lavon’ny First Bank, avy any Nizeria, tamin’ny isa, 74 no ho 40 ny ekipan’i Ndranto sy i Erick, teo amin’ny andro voalohany. Nanatombo teo amin’ny traikefa sy ny haben’ny vatana ny Nizerianina. Nitarika hatrany izy ireo, teo amin’ireo tapa-potoana efatra nilalaovana. Tsy mbola afaka ihany koa ny MB2 All, teo amin’ny andro faharoa, notanterahina omaly, satria niondrika teo anatrehan’ny Institut national sécurité sociale (CNSS), avy any ammin’ny Repoblika Demokratikan’i Kongo, tamin’ny isa mazava, 71 no ho 51. Ry zareo Kongolezy, efa zatra fifaninanana iraisam-pirenena. Mila mandresy ny MB2 All, eo amin’ireo lalao roa farany, hatrehin’izy ireo. Hidona amin’ny Kenya Ports Authority, ny MB2 All, rahampitso ary hifanandrina amin’ny Lakers de Zimbabwe, eo amin’ny lalao farany, ny alarobia. Torcelin
Lozam-pifamoivoizana :: Vehivavy roa maty voadonan’ny fiara
Nisehoana lozam-pifamoivoizana roa samy hafa teny Anosizato sy Ampitatafika, afak’omaly hariva. Maty tsy tra-drano ny vehivavy roa, manodidina ny dimampolo taona avokoa. Voahitsaky ny kamiao teo Anosizato ilay renim-pianakaviana, fito amby dimampolo taona. Voadonan’ny fiara tsy mataho-dalana teny amin’ny digy Ampitatafika kosa ilay faharoa. Efa eo anivon’ny mpitandro ny filaminana ny fanadihadiana momba ireo loza ireo. Voatazona ihany koa ny mpamily roa. Tokony ho tamin’ny enina ora sy sasany hariva no nitrangan’ny loza voalohany teo Anosizato Andrefana. Mipetraka eny amin’ny manodidina eny ihany ity renim-pianakaviana tra-doza. «Nandeha teo an-tsisin-dalana misy vatokely sy dongon-tany tamina fanamboaran-dalana io vehivavy io. Heverina ho nisilifatra izy ka nianjera teo amin’ny arabe. Nandeha niadana ny kamiao iray no nanitsaka an’ ilay vehivavy», araka ny fanazavana voaray tamin’ny Zandarimaria eny an-toerana. Telopolo minitra taorian’izay, naheno antso milaza fisiana lozam-pifamoivoizana hafa faharoa eny amin’ny digin’ Ampitatafika indray ny zandary. Efa vatana mangatsiakana vehivavy iray no novantanin’izy ireo, teny an-toerana. Ny fitantaran’ny olona teo amin’ny manodidina sy ny mpamily no nahafantarana ny zava-niseho. «Avy nandeha teny amin’ny sisin’arabe misy faritra avoavo ihany koa ilay vehivavy. Handeha hiampita izy no nianjera teo ambonin’ny fiara tsy mataho-dalana iray. Lavidavitra teo vao tafajanona ny fiara. Nipitika avy teny amboniny, avy eo ity vehivavy voadona», hoy ihany ny zandary. Tsy maintsy notazonina ireto mpamily roa nanao loza noho ny fisiana aina nafoy. Samy naterina eny amin’ny tranom-patin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona ny razana roa. Tsy mbola fantatra kosa ny mombamomba an’ilay vehivavy maty teny Ampitatafika. L’article Lozam-pifamoivoizana :: Vehivavy roa maty voadonan’ny fiara est apparu en premier sur AoRaha.
Kaominina Antananarivo Renivohitra : nanolotra fanampiana ny fikambanana VonjeoNyDokotera
Fitaovana maro entina miady amin’ny fiparitahan’ny valanareina Covid-19 ny natolotry ny fikambanana Vonjeo­NyDokotera ho an’ny kaominina Antananarivo Renivo­hitra. Nanolotra izany tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Ana­lakely Rabemananjara Audrey, avy amin’ny fikambanana. Nahitana “combinaison” miisa 0 sy fonon-tanana dimy baoritra ary arotava azo sasana 100 ao anatin’izany tolotra izany. Ankoatra izany ny fitaovana fandrarahana ranom-panafody miisa dimy amin’ny 16 litatra ary ny “gel disinfectant” 15 litatra miaraka amin’ny “viseur” miisa 20. Natolotra avy hatrany ny BMH Isotry ireo fanampiana ireo ahafahany manao ny asa fanadiovana ny tanàna amin’izao fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao. Entina hiaro­vana indrindra ireo mpiasa miandraikitra ny fanadiovana ao amin’ity sampandraharaha ity, araka izany, ireo fitaovana. Nisaotra ny fikambanana ny ben’ny Tanàna Andriantsito­haina Naina tamin’ireo tolo-tanana natao.Tatiana AL’article Kaominina Antananarivo Renivohitra : nanolotra fanampiana ny fikambanana VonjeoNyDokotera a été récupéré chez Newsmada.
Cnaps sy Orange: azo jerena amin’ny finday ny tolotra rehetra
Mivoatra manaraka ny teknolojia niomerika ny tolotra omen’ny CNaPS ny mpikambana. Azo jerena mivantana any anaty finday, laharana Orange, ny tolotra rehetra sy ny fifanakalozana ara-bola samihafa.Natao sonia, omaly, ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS) sy ny mpandraharaha fifandraisan-davitra Orange. Tafiditra ao anatin’ity fiaraha-miasa ity ny fahafahan’ny mpikambana ao amin’ireo mampiasa ny finday laharana Orange ka hijerena mivantana ny tolotry ny CNaPS samihafa. Azon’ny mpampiasa atao koa ny mandoa ny latsakemboka amin’ny Orange. Nilaza ny tale jeneralin’ny CNaPS, Rakotondrainibe Mamy, fa natao izao hetsika izao hanamaivanana ny mpikambana, satria tsy voatery hivezivezy ho any amin’ny masoivohon’ny CNaPS intsony fa amin’ny alalan’ny finday ihany dia vita. Afaka 10 andro no hanomboka hisitraka izao fomba fiasa vaovao izao ny mpikambana manerana ny Nosy.Miisa 35.000 ny hahazo Tsinjo famenoManampy izany, nilaza koa ny tale jeneralin’ny CNaPS fa manodidina ny 35.000 ireo mpiasa nangataka ilay findramam-bola omen’ny Tahirim-pirenena, efa nahazo ny 3.000. Tsy manatona ny masoivoho fa arotsaka mivantana any amin’ny kaonty bankin’ny mpikambana, na koa amin’ny mobile money, izany hoe ny kaonty vola any amin’ny finday.Tsiahivina fa mbola afaka mangataka ny mpiasa mpikambana CNaPS mialoha ny 30 septambra 2020 ho avy izao.Njaka AndriantefiarinesyL’article Cnaps sy Orange: azo jerena amin’ny finday ny tolotra rehetra a été récupéré chez Newsmada.
Amin’ny volana oktobra ho avy izao vao ho hivoaka ny valin’ny fanisam-bahoaka natao tamin’ny taona 2018 na ny RGPH3. Mbola ny fampidirana ireo tarehimarika amin’ ny solosaina no ataon’izy ireo ankehitriny, raha ny fanazavana azo. Dingana maro no mbola ho sahanin’ ny Ivon-toerana momba ny antontan’isa (Instat) aorian’io fikarakarana ireo tarehimarika ireo. L’article Fanisam-bahoaka est apparu en premier sur AoRaha.
Fivahinianan’ny PAPA :: Handray an-tanana ny lafiny fandaminana ny Antilin’i Madagasikara
Nivory tetsy amin’ny lapan’Ambohitsorohitra niaraka tamin’ny ekipan’ny seraseran’ny Fiadidiana ny repoblika ireo mpikambana ao amin’ny birao foiben’ny Antilin’i Madagasikara, omaly. Tapaka fa handray an-tanana ny lafiny fandaminana mandritra ny fivahinianan’ny Papa François eto Madagasikara ny Antilin’ i Madagasikara. Araka ny nambaran’ i Manankajaina Agatino, filoha iombonan’ny Antily mane rana ny Nosy dia : “skoto sy mpilatsaka an-tsitrapo miisa roa arivo sy iray alina mahery no efa nentanin’ny Antilin’ i Madagasikara mba hirotsaka an-tsehatra amin’ny fampizo- rana ara-dalàna ny fahatongavan’ny Papa Ray Masina”. “Ankoatra ny famaritana ireo lamina rehetra tokony hoarahina dia handamina ny mpanao gazety sy hanampy amin’ny fanaraha-maso amin’izay mety ho fihoaram- pefy koa izahay”, hoy izy. Tsahivina fa amin’ny 6 septambra ho avy izao ny Filohan’ny Eglizy katolika Romana maneran-tany no higadona eto amintsika. Hivahiny efatra andro eto izy. Hitsidika toerana samihafa, hampivory tompon’andraiki- panjakana sy tanora maro ary hitarika ny fotoam-pivavahana lehibe etsy Soamandrakizay Androhibe, amin’ny 8 septambra ho avy izao. Nicoh R L’article Fivahinianan’ny PAPA :: Handray an-tanana ny lafiny fandaminana ny Antilin’i Madagasikara est apparu en premier sur AoRaha.
Fahadimy taonan’ny tarika: hanome tolotra miavaka ny Miantsa’s Kanto Orchestre
Feno dimy taona, ankehitriny, ny Miantsa’s Kanto Orchestre, izay tarika noforonin-dRafidimanana Noelison Erick (mpihira sady mpanentana ary tonian-danonana na « maître de cérémonie » ao anatin’ny tarika ihany). Niforona tamin’ny taona 2015 ny Miantsa’s Kanto Orchestre. Fanentanana mariazy sy « cabaret » no tena ataon’ny tarika. Manafana ireny « déjeuner dansant » ireny ihany koa. Amin’izao fahadimy taonany izao, manana tolotra miavaka ny Miantsa’s Kanto Orchestre, toy ny fanentanana lanonana sy ny fanamafisam-peo « sonorisation », ny jiro sy hazavana, ny « Animation DJ » miaraka amin’ny fanentanana sy ny tonian-danonana, indrindra ny « effet spéciaux » manontolo. Marihina fa fitaovana an-dry zareo daholo ireo.« Anisan’ny mampiavaka anay amin’ny hafa ny filalaovana ny karazan-kira na « répertoire » misy amin’ny faritra enina. Izany hoe, tsy mifidy gadon-kira holalaovina izahay ary arakaraka ny karazan’olona ao anaty fety no hitondranay ny zavatra atao. Raha olona efa nahazo taona daholo, ohatra, ny ankamaroan’ny mpanatrika, fantatra avy hatrany ny hira sahaza ho azy ireny. Raha avy any Mahajanga, afaka milalao salegy sy baoejy, avy any Toliara, efa fantatra avy hatrany ny tokony ho mety aminy”, hoy ny solontenan’ny tarika. Milalao karazan-kira sy gadona maro be ny tarika ka ao anatin’izany ny tropikaly, ny gasigasy, ny « danse de salon », ny kalon’ny fahiny, ny hira vao nivoaka, sy ny hira tsiahy. Miankina be dia be amin’ny filan’ny olona ao anaty lanonana no andrindrana azy, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny tarika.NarilalaL’article Fahadimy taonan’ny tarika: hanome tolotra miavaka ny Miantsa’s Kanto Orchestre a été récupéré chez Newsmada.
11 è Fed: 518 tapitrisa euros avy amin’ny UE
Mitentina 518 tapitrisa euros ny vola avy amin’ny Vondrona Eoropeanina (UE), iadiana amin’ny fahantrana sy hanarenana ny toekarena eto Madagasikara. Avy amin’ny Tahirimbola eorpeanina ho an’ny fampandrosoana andiany 11 è Fed ity fanampiana ity, ao anatin’ny fandaharanasa Programme indicatif national (PIN), ho an’ny fe-potoana 2014-2020. Miandraikitra ny fandrindrana sady manara-maso ny fanatanterahana ny asa ny Birao manohana ny fiaraha-miasa any ivelany (BACE).Nilaza ny talen’ny BACE, Rakotomahefa Bruno Maurille, fa mifandray amin’ireo minisitera mahazo ny famatsiam-bola izy ireo, mijery ny tetikasa ho tanterahina. Miantoka ny fanaraha-maso ny fanatanterahana sy ny firindran’ny tetikasa izahay, raha vao nivoaka ny famatsiam-bola.Sehatra telo lehibe no voakasiky ny 11 è Fed ao anatin’ny PIN. Ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny asa ho an’ny vahoaka (145 tapitrisa euros), ny lafiny fotodrafitrasa ara-toekarena (230 apitrisa euros) ary ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra (130 tapitrisa euros). Manampy ireo ny fanohanana ny fierahamonim-pirenena (8 tapitrisa euros) sy ny fanamorana ny fiarahamiasa teknika (2 tapitrisa euros). Efa nivoaka ny 96%-n’ny vola. Hanampiana ny tetibolam-panjakana ny 21 tapitrisa euros ambiny.Njaka A.L’article 11 è Fed: 518 tapitrisa euros avy amin’ny UE a été récupéré chez Newsmada.
Misoko mangina ny isan’ireo maty: tafakatra 228 ireo lavon’ny covid-19
Tsy re tsaika, efa hananika ny 230. Namono olona iray indray ny valanaretina coronavirus, omaly. Avy any amin’ny faritra Matsiatra Ambony izy io ary notsaboina tao amin’ny CHU Andrainjato. Tafakatra 228 izany izao ireo lavon’ny covid-19 hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty.Etsy an-daniny, midina hatrany ny isan’ireo tranga vaovao. Miisa 30 ireo nifindran’ny valanaretina ka avy eto Analamanga ny 10 amin’izany. Fito avy ny any Alaotra Mangoro sy Diana. Efatra ny any Matsiatra Ambony raha iray avy ny any Atsimo Andrefana sy ny avy any Menabe.Nihena tahaka izany koa ireo anaty fahasarotana. Miisa 11 ireo “forme grave” izao raha 15 izany teo aloha. Miisa 34 ireo sitrana ka tafakatra 14 867 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana amin’ireo mitondra ny tsimokaretina miisa 16 221. Nidina ho 1 124 kosa ireo mbola tsaboina sy arahi-maso ny toe-pahasalamany.Synèse R. L’article Misoko mangina ny isan’ireo maty: tafakatra 228 ireo lavon’ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Gros prise de la gendarmerie nationale. Un camion semi-remorque transportant 30 tonnes de micas a été surpris par des éléments de la brigade de police de la route du poste de contrôle de Tanambao, dans la commune d’Ampitambe, dans le district de Moramanga. Ces produits miniers viennent de la commune rurale d’Andromba, district d’Ambatondrazaka pour être acheminés à Toamasina. La gendarmerie a immobilisé le camion après avoir constaté des anomalies sur les paperasses de la femme, propriétaire de la cargaison. Travaillant dans le secteur minier, elle dispose d’un permis d’exploitation de girasol-cristal et du quartz hematoïde. En effet, elle n’est pas autorisée à opérer dans les micas. Poursuivie pour exploitation et transport illicites de ce genre de produits, elle a été arrêtée pour enquête. La cargaison a été saisie et le camion a été mis en fourrière à Moramanga. Le commandant de la brigade de police de la route a déjà alerté le service de mines à Antananarivo qui se chargera la continuité de la procédure dans le cas pareil. On attend alors la suite de cette affaire. T.M. L’article Transport illicite de produits miniers : 30 tonnes de micas saisies dans un camion est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Transport illicite de produits miniers : 30 tonnes de micas saisies dans un camion a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fihariana: sahirana izao ny mpanao biriky
Fihariana iray goavana be mpanao eto amin’ny faritra Analamanga ny fanaovana biriky tanimanga eny an-tanimbary. Mandritra maintany, aorian’ny miaka-bary, ny fiasana fanaovana biriky, manomboka ny volana mey hatramin’ny volana septambra. Miankina amin’ny toetr’andro amin’ny ankapobeny fa miankina amin’ny toe-tany. Maharitra telo volana eo ho eo ny asa, manomboka amin’ny fihadiana tany, ny fandrafetana sy ny fandorana azy.Fianakaviana tompon’ny tanimbary ihany no miasa azy na mampanofa ny taniny. Ao ny efa za-draharaha hatramin’ny taranaka mifandimby mivelona amin’io asa fanaovam-biriky io isan-taona. Faritra maromaro ny hiasana amin’izany, araka nambaran’ireo mpanao azy. Samy ahitana izany eny Atsimondrano sy eny Avaradrano. Fantatra anefa fa tsy maharaka intsony ny akora tanimanga ka tsy maintsy manampy tany hafa, mitaona tany mihitsy ireo mpanao biriky ireo. Misy karazany ireo tany ireo: lamoka, mangakely, tain-drihitra, loham-pototra, sy ny maro hafa.Tsy latsaky ny 100 AriaryVoalazan’ireo mpiasa biriky fa tsara avokoa ireo. Izy ireo moa mivarotra dia tsy maintsy izay ny lazainy fa ny mpanao trano matihanina, mahafantatra tsara ny tena ilaina, miankina amin’izay trano hatao. Miankina amin’izay koa ny vidiny. Amin’ny ankapobeny, tsy latsaky ny 100 Ariary ny biriky iray eny am-potony, miampy ny saram-pitaterana io. Ankoatra ny fiara, misy mitondra amin’ny sarety, araka izay toerana aleha ny sarany. Milaza fa sahirana ankehitriny ireo mpanao biriky, noho ny antony maro: tsy ampy ny tany sy ny rano, lafo ny kitay fandorana azy. Izany rehetra izany, noho ny fiovan’ny toetr’andro (zahao ny lahatsoratra Fivadihan’ny toetr’andro). R.MathieuL’article Fihariana: sahirana izao ny mpanao biriky a été récupéré chez Newsmada.
Fanadiovana tatatra: fokontany 10 anaovana asa Himo
Nifarimbona nanadio tatatra ireo RF2 avy amin’ny fokontany maro, nanomboka omaly. Nanala ny fako mitoby anaty lakandrano manentsina ny fikorianan’ny rano izy ireo hitsinjovana sahady ny fahavaratra. Mahazo tombony amin’izao ireo fokontany folo eto Antananarivo, Ankasina, Andavamamba, AnjezikaI, Tetezana Afovoany I, 67Ha Atsimo, Antohomadinika, Andavamamba Ambilanibe, Anosibe, Ivolaniray, Manajary ary Ambohidahy. Amin’ny alalan’ny Himo, andiany faharoa no hanatanterahana izany. Olona 20 isaky ny fokontany no mahazo asa amin’ny alalan’ity fanadiovana tatatra ity. Mahazo 5000 Ar isan’andro avy amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra izy ireo amin’ny fanatanterahana izany asa izany. Nisy ihany koa ny fizarana arovava sy savony ho an’ireo RF2 ireo. Mila fanaraha-maso akaiky ny tandrevaka ataon’ny mponina eny amin’ireo toerana andalovan’ny lakandrano. Misy ireo manary fako sy poti-kanina any an-tatatra ka manentsina ny fikorianan’ny rano ary miteraka fiakaran’ny rano mihitsy rehefa fotoam-pahavaratra.Tatiana AL’article Fanadiovana tatatra: fokontany 10 anaovana asa Himo a été récupéré chez Newsmada.
Le ministre de la Justice, Johnny Richard Andriamahefarivo, entend redorer le blason du ministère de la Justice. Le ministre de tutelle estime qu’il faudrait redorer le blason du monde judiciaire. L’objectif étant de mettre en place une justice proche du peuple, intègre et respectueuse des valeurs humaines. Le ministre de la Justice, Johnny Richard Andriamahefarivo, a déclaré en marge de l’atelier des greffiers qui s’est tenu hier matin, à l’ENMG Tsaralalàna qu’« effectivement il y a des brebis galeuses au sein du monde de la Justice, peut-être cela n’est pas connu de tout le monde, il y aurait des magistrats qui vont passer en Conseil de discipline (CODIS)… Des sanctions seront prises à l’encontre de ces magistrats, des greffiers et des agents pénitentiaires ». Et d’enchaîner «qu’actuellement, il y a des magistrats qui font l’objet d’enquête, il en est de même pour les greffiers… Je tiens à souligner que ce n’est pas par les attaques portées à l’encontre de ces brebis galeuses qui vont constituer un paramètre pour mesurer si l’on travaille ou non, mais plutôt par le biais des efforts collectifs afin de donner un nouvel élan au monde judiciaire à Madagascar ». Evaluation. Le Garde des Sceaux n’a pas manqué aussi de procéder à une évaluation de ce qui a été fait depuis les huit mois qu’il a été à la tête de ce ministère, sans oublier pour autant de parler des perspectives d’avenir. Le ministre de la Justice a reconnu que « ces huit mois n’étaient pas de tout repos malgré tout, c’est un poste qu’on a accepté, on doit l’assumer ». Dans la même foulée, il entend redorer le blason du monde judiciaire afin de restaurer la confiance que les gens ont envers la justice. Et c’est la raison de la tenue de cet atelier qui va durer 12 jours, a-t-il indiqué. Notons que les greffiers en chef sont au nombre de 50, et les greffiers et leurs collaborateurs directs qui ont suivi cet atelier. Faut-il rappeler que dès sa prise de fonction, le ministre de la Justice a mis en garde le personnel contre les mauvaises pratiques qui ont entaché l’image de la justice. Toujours dans la journée d’hier, mais plutôt dans l’après-midi, l’ambassadeur de l’Inde à Madagascar, Abhay Kumar, a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Justice. Johnny Richard Andriamahefarivo. Il a été surtout question d’une coopération entre la justice malgache et indienne. Recueillis par Dominique R. L’article Ministère de la Justice : Des magistrats vont passer en conseil de discipline est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Ministère de la Justice : Des magistrats vont passer en conseil de discipline a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fanabeazana eto an-drenivohitra :: Hivoaka, amin’ny faran’ny herinandro, ny voka-panadinana BEPC
Vinavinaina hivoaka, amin’ny faran’ity herinandro ity, ny voka-panadinana BEPC eto amin’ny fari-piadidiam-pampianarana (Cisco) Antananarivo renivohitra. Mampiditra ny naoty ao anaty solosaina ireo mpikirakira, amin’izao fotoana izao. Manodidina ny dimanjato ny isan’ireo mpampianatra mikarakara ny fandrafetana an’ireo naoty ireo. « Tamin’ny sabotsy lasa teo no nifarana ny fitsarana. Efa eny Antanimbarinandriana avokoa ny taratasim-panadinana. Maharitra efatra andro fara-fahaelany ny fampidirana ny naoty ao anaty solosaina. Tombanana, fara-fahatarany any amin’ny alahady, ny fivoahan’ny voka-panadinana eto an-drenivohitra », hoy Ramananantony Lalaina, lehiben’ny Cisco Antananarivo renivohitra. Efa misy ireo faritra namoaka ny voka-panadinana BEPC, toy ny any Iakora, Faratsiho, Ambatolampy, Antsalova, Soalala, Midongy Atsimo, Ikalamavony, Besalampy, Antanifotsy, Mandoto, Befotaka, Morafenobe, Benenitra, Sakaraha ary Antanambao Manampotsy. L’article Fanabeazana eto an-drenivohitra :: Hivoaka, amin’ny faran’ny herinandro, ny voka-panadinana BEPC est apparu en premier sur AoRaha.
Basikety-NBA: tafakatra famaranana ny ekipan’ny Lakers
Mazava ny lalana ho an’ny ekipan’ny Lakers, anatin’ny fifaninanana NBA, taranja basikety. Taorian’ny fifandonana indimy, nanoloana ny ekipan’ny Nuggets, fandresena efatra ny azon’ny ekipan’i James Lebron. Araka izany, efa tafakatra famaranana ny ekipan’ny Lakers ary miandry izay tafavoaka avy amin’ny kaonferana atsinanana sisa izy ireo. Raha hiverenana ny lalao efa vita, azo lazaina ho tena niady avokoa ny fihaonana teo amin’ny Lakers sy ny Nuggets. Nahavita dingana goavana ity ekipan’i Jamal Murray ity, na fandresena iray ihany ary ny azony nanoloana an’ny Lakers. Saika isa tery dia tery hatrany mantsy ny nisarahan’ny roa tonta tao anatin’izay lalao dimy vita izay. Ho an’ny Lakers kosa, manam-panantenana tanteraka izy ireo handrombaka ny fandresena amin’ny lalao famaranana, na eo aza ny tsy fahasalamana mahazo ny mpilalao sasany, toa an’i Anthony Davis.Etsy ankilany, samy miady mafy ihany koa ny ekipan’ny The Heat sy ny Celtics, ao amin’ny kaonferansa atsinanana, hahazoana ny tapakila hiatrehana ny lalao famaranana, hifandonana amin’ny Lakers. Mi.RazL’article Basikety-NBA: tafakatra famaranana ny ekipan’ny Lakers a été récupéré chez Newsmada.